(LA YAABKA):- Tuugo dhowr dameer qalatay oo si xun loo garaacay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(LA YAABKA):- Tuugo dhowr dameer qalatay oo si xun loo garaacay
Qaar ka mid ah dadka ku nool Deegaanka Mai Mahiu ee hoos tagta Degmadda Naivasha ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay maanta ku xoomeen, isla markaana ay si xun u garaaceen 3 Tuugo oo qalatay 4 dameer oo ay dadkaasi lahaayeen.
Tuugada ayaa la arkay iyagoo baco waa weyn ku wata Hilibka Dameeraha, si ay ugu iib geeyaan Suuqa lagu iibiyo Noocyadda Hilibka.
Goobjooge lagu magacaabo Joseph Njoroge ayaa sheegay in Koox Dhallinyaro oo raadinayey Dameero ka lumay ayaa waxay arkeen Tuugadii, kadib, markii ay qaar ka mid ah dadka Deegaanka u soo far muuqeen.
Goobjoogaha oo u waramay Wargeyska The Star ayaa sheegay inay Boliska badbaadiyeen Tuugadii la garaacayey, kuwaasi oo la dhigay Isbitaalka,kadib, markii ay dadkii lahaa Dameeraha ay si arxan lahayn u garaaceen.
Boliska waxay sheegeen in Tuugadii lagu ilaalinayo Isbitaalka, isla markaana marka ay ladnaadaan la hor geyn doono Maxkamadda.
Sarkaal ka tirsan Boliska Deegaanka Mai Mahiu oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin ayaa ugu baaqay dadka inaysan Sharciga gacmahooda ku qaadanin, isla markaana ay Boliska ku soo wargeliyaan si tallaabo looga qaado Dembiilayaasha.
Mid ka mid ah dadkii lahaa Dameeraha la qashay ayaa sheegay in garaacista Tuugada ay Farriin cad u tahay kuwa shaqada ka dhigta inay qashaan Dameeraha la soo xaday, si ay u cunaan ama ay u sii iibiyaan.
Taliyaha Guud ee Milliteriga Talyaaniga oo maanta booqasho ku yimid Muqdisho.
Madaxweynaha oo dib ugu soo laabtay magaalladda Muqdisho.